Isbeddelada Bentley Map V8i ee 2011 - Geofumadas
Abriil, 2011 Geospatial - GIS, tabo cusub, Microstation-Bentley
Maalintii 7 ee Abriil Bentley wuxuu qabtay shirkii internetka, halkaas oo uu muujiyay alaabta goobta degaanku ku haboon yahay ee lagu magacaabo Bentley Map (Xulashada 2). Munaasabadda ayaa mas'uul ka ahaa Richard Zambuni, Agaasimaha Caalamiga ah ee Suuq-geynta Deegaanka Gobollada iyo Robert Mankowski, Madaxweyne Ku-Xigeenka Horumarinta.
Ayaa lagu soo bandhigay oo ku salaysan faa'iidooyinka ka iman kara Bentley ayaa aaminsan in ay leeyihiin, qalab GIS faahfaahinta CAD ah, khadadka si toos ah is dhexgalka injineernimada natively taageero qaabab dulinka badan, haya'ad ee Daqsi iyo awoodaha si 3D Cities.
Isbeddelka aan ku arkay labadii sano ee la soo dhaafay waa mid muhiim ah. MapScript iyo Cadastre waa la waayay, taas oo qayb ka ah Bentley Map, halka PowerMap ay u muuqato inay awooddeeda hoos u dhigtay awoodda PowerView iyo khadka ganacsiga cusub ee sigaar-cabbida sarreysa.
Asal ahaan waxaa loo tagay seddex siyood oo waaweyn:
Naqshad fudud oo la yiraahdo Bentley Map PowerView,
Nooc buuxa oo la yiraahdo Bentley Map V8i
Iyo xariijin ganacsi oo la yiraahdo Bentley Map Enterprise V8i
In badan ama ka yar waxa aan filayay fikradahayga, inkasta oo aan rajaynayo in shaki ka mid ah lagu caddeeyo BeTogegher. Aan aragno waxa kala duwan ee jira iyo wixii alaab ah ee dhaxalka ah Waxaa ka mid ah:
Waxay u eg tahay nuqul la mid ah PowerMap oo si fiican loo yaqaan, laakiin waa ka jaban tahay. Waad abuuri kartaa khariidadaha, waxaad kala sooceysaa xogta xfm, akhriso Bentley I-moodooyinka, xogta qaddarinta, qaadista raajada, waxay abuureysaa codsiyada API.
Tani waxay taageertaa Markup, taas oo ah wax la mid ah waxa Redline loo isticmaalo in dib loo eego mustaqbalka. Anigu ma fahmi karo hada wixii loo yeeray: Laydinka «Loogu talagalay MicroStation» Rakibaadda taas oo u muuqata naafanimadan.
Abuurista khariidaduhu waxay ku koobantahay hal qaab by dgn inkastoo aan horay u gudbiyay wareejin ah si aad uga boodo xayndaabka this iyo dukumiintiga xogta ku salaysan aaladda waxay u baahan tahay shatiga Server Geospatial oo la socdo xiriirka Oracle Spatial.
Waxaan fahamsanahay in qaabkan aan sameyneyno waxkastoo awoodda PowerMap, in kastoo aan sugi doono inaan soo dejiyo oo aan tijaabiyo maxaa yeelay waxay u muuqataa in ay jiraan awoodo badan oo ay hoos u dhaceen inkastoo aysan sidaas ahayn. Inkasta oo la samayn karo arrintan, waxaa lagama maarmaan ah in la arko xaaladaha ay tahay Maamulaha Geospatial iyo inta le'eg Microstation waxaa lagu daraa awoodda wax qabadka vector.
Noocaan, marka lagu daro kartida PowerView, waxay taageertaa dhoofinta xogta I-moodooyinka iyo hababka kale ee juquraafi, xogta ku habboon oo ku salaysan mawqif. Noocani wuxuu sidoo kale taageersan yahay habka 3D, laakiin wuxuu ku yaal kaliya lakabyada vector wuxuuna u beddeli karaa qoraallada wax lagu qoro.
Qoraallada ugu badan ee nuqulkan, waa habka Qodobka Qodobadda Cadastariga ah ee la isku darey xirmada, taas oo ay ka baxayso Bentley Hotels iyo barnaamijka waxaa ka mid ah sigaarcab wanaagsan oo loogu talagalay maareynta topolojiyada ballaadhan, isdhexgalka xogta COGO iyo qalab loogu talagalay qaabeynta wareegidda wareegga.
Qalabka kale ee la isku dhafay waa Meelmarinta Khariidadda Habboon, ama waxa aan u adeegsanay in aan ogaano sida MapScript. Tani waxay leedahay sifooyin dhowr ah oo loogu talagalay maareynta daabacaadda iyada oo la raacayo qaab isdabajoog ah, oo ay ku jiraan saameyn aad u wanaagsan sida hufnaanta iyo maaraynta xayeysiinta daabacaadka oo leh awood dheeraad ah oo loo diro PDF.
Qalab kale oo isku dhafan oo isku dhafan ayaa ah faafinta FME, kaas oo aad la fal-gali karto nooc kasta oo xog ah iyo qaabka xogta. Ugu wanaagsan ee aan arko marka la eego wadashaqeyntu, ogaanshaha in FME uu noqon doono mid ka mid ah soo-saarka ugu weyn ee aan arki doono CAD-ka iyo GIS-gu waxay ku midoobi doonaan hal mar.
Qaar badan oo amarro ah ayaa la isku daray, qaar ka mid ah sida cusub iyo kuwo kale oo wax laga beddelay, sida kala soocida geeddi-socodka ee Deedka iyo qaabaynta xogta raajada ah ee aan rajeynayo inaan dib u eego boos kale.
Noocaan waxaa loogu talagalay geedi socodka sigaar cabbista. Waxaa ka mid ah qoraallada ku saabsan 3D, DEM model, taxadar-gelinta iyo hagaajinta lakabyada raajka ah ee lagu qeexay xogta Oracle, falanqaynta xajmiga ee 3 Cabbiraadeed oo la socota go'aan qaadashada.
Laga soo bilaabo tan, waxaan si dhaqso ah u arki karnaa mashaariic magaalooyin caqli-gal ah oo ka socda 3D mashaariicda Kanada iyo Denmark. Heerka suuqa Soomaliya, waxaa jira waxyaabo badan oo asaasi ah oo lagu xalliyo si looga fekero arjiga mashaariicdan; Waxaa laga yaabaa in Brazil ama mid ka mid ah waddamada Charter Cities ay kor u qaadaan waxaan arki karnaa wax.
Guud ahaan, waxay u muuqataa tallaabo xiiso leh Bentley, markay soo koobayso alaabooyin kala duwan oo ka mid ah baaxadda geospatial ee saddex soodhaweyn leh: hal nal ah, mid dhammeystiran iyo midab kale.
Bentley Map waa barnaamij heer sare ah oo loogu talagalay mashaariicda juquraafiyadeed, oo leh karti ay ka sareyso dad badan oo kale tartanka.
Isbedelka waqti aan saamayn ku yeelanayno caqabadaha horey u jiray, ma jiraan qaabab cusub, halkii ay xoojin lahayd codsiyada horeba lagama maarmaanka u ahaa kartida GIS ee Bentley Map.
Si kastaba ha ahaatee weli codsi la qabto wanaag keliya ee suuqa oo ay Bentley leeyahay xoog leh, inta badan ee Industrial Engineering Civil iyo iyo suuqyada oo aad u ballaaran (United States, qaar ka mid ah dalalka Yurub, Hindiya, Brazil) in la siiyo tusaalayaal qaar ka mid ah. Iyada oo wax walba iyo hufnaanta ay gaareen dadka isticmaala calaamadahan, jagooyinkoodu waa hooseeya heerka isticmaalaha CAD marka la barbar dhigo dadka isticmaala "AutoDesk"; halka dhexdhexaadinta GIS, marka codsiyada kale lagu daro, waa tartiib tartiib tartiib tartiib ah marka la barbardhigo AutoDesk laakiin aad ayuu u hooseeyaa markii loo barbar dhigo ESRI.
Waan ognahay, waxay yihiin suuqyo kala duwan oo siyaabo macquul ah u-dhexgalka wadooyinka kala duwan. Iyadoo AutoDesk ayaa dhawaan faa'iidaystay suuqa design iyo isku dayo in uu ku milmaan Engineering naqshadeyntu, ESRI weli keliya GIS, Bentley ahmiyad Engineering iyo sida gunno kubiiray GIS laakiin iyada oo diiradda la on macaamiisha hadda jira.
Xaaladdan, oo leh jiilka faa'iido ku filan iyo meeleyn qaraabo ah ayaa albaabada u xiraya dib u soo kabashada dhulalka dibadda.
Waayo, Bentley, waa in la aqoonsado in la eego awoodda, Bentley Map leeyahay awooda uu ku sameeyo wax kasta oo leh is-dhexgalka web, mashaariic injineernimada, gaadiidka, Geedaha iyo isbedelka horumarka BIM. Laakiin by novel dhamaadka user ee, ka iibsan Bentley Map internetka, furo sanduuq, buuga, rakibi, ka dibna doonayaan in ay hirgeliyaan mashruuc ma fududa mana jirto wax badan oo ku saabsan internetka halkaas oo si aad u hesho tusaalayaal kaas oo diyaariyey hanuun. Waxay u baahan tahay tababbar iyo gargaar toos ah, la fahmi karo, laakiin sidoo kale caqabadaha sii kordhaya ee software-kani waxay u isticmaalaan dadka cusub ee loo isticmaalo barnaamijyada caansan ama barnaamijka bilaashka ah.
Dareenkan, waxaan arki doonaa koritaanka user SIG-ga oo ka badan Bentley Map. Inkasta oo ay tahay heer shirkadeed, mashaariic waaweyn oo cadawre ah, shirkadaha injineernimada raadinaya in ka badan, Bentley Map waa meel kale oo weyn.
Post Previous«Previous Geofumadas: Safarka dheer ee sawirada 8
Post Next Gaia GPS, si ay u qabsadaan GPS, Ipad iyo jidadka mobileNext »